LinkedIn bụ netwọkụ mmekọrịta kacha elu maka ndị ọkachamara B2B n'ụwa na, enwere ike ịrụ ụka, ọwa kacha mma maka ndị na-ere ahịa B2B iji kesaa ma kwalite ọdịnaya. LinkedIn ugbu a nwere ihe karịrị ọkara ijeri ndị òtù, na-enwe ihe karịrị 60 nde agadi-ọkwa influencers. O doro anya na onye ahịa gị ọzọ nọ na LinkedIn… ọ bụ naanị otu ị si ahụ ha, jikọọ na ha, ma nye ozi zuru oke na ha hụrụ uru ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Notice hụrụ ka m na-akpọghị aha edemede a How to Drive More Leads with LinkedIn? Nke ahụ bụ n'ihi na njedebe nke LinkedIn na-eme ka ọ ghara ikwe omume maka a ọkachamara ahịa iji mee ka ikpo okwu dị elu maka nyocha na ịchọpụta atụmanya ha na-esote. Nwere oke ozi ole ị nwere ike izipu kwa ọnwa, ụzọ ole ị nwere ike ịchekwa, ị nweghị ike ịchọpụta onye lere profaịlụ gị, ịnweghị ohere ọ bụla nwere ike ịchọ, yana ịnweghị ohere atụmanya n'èzí netwọk gị.
Enwere okwu anyị ji na LinkedIn mgbe anyị jikọtara mmadụ ma ozugbo anyị nwere ọnya nzuzu, ozi ahịa inbound… Akwụsịla. Amaghị m onye wetara okwu ahụ, mana ọ bụ naanị na ebum n'uche ya. Ọ dị ka imeghe ọnụ ụzọ gị ma onye na-ere ahịa weta ozugbo ma bido ịre gị. M na-ekwu "gbalịa" n'ihi na ndị na-elekọta mmadụ na-ere n'ezie nwere ihe ọ bụla na-eme na pitching, ọ bụ banyere ewu a mmekọrịta na-enye uru.
Jiri mkpụmkpụ: Ihe ọ bụla karịrị ahịrịokwu 5-6 na-achọ ịdaba na LinkedIn, ọkachasị mgbe ị na-elele na ekwentị. Gwa onye ị ga - azụ ahịa ka ị ga - esi mee ka ndụ ha ka mma n’ihe ole na ole. Ọtụtụ ozi Cleverly kachasị rụọ ọrụ bụ ahịrịokwu 1-3.
Nye Nkwado Nlekọta: A atụmanya mbụ ọchịchọ bụ na-ekweghị na ị. Yabụ, ọ dị oke nkpa ma aha ndị ahịa ama ama, kwupụta nsonaazụ akọwapụtara ị nwetara, ma ọ bụ tụọ aka na ọmụmụ ihe n'ezie.
Mgbalị ahia ọ bụla na-achọ ọtụtụ mmetụ iji gbasaa na atụmanya ahụ. Ihe ndị ị na-atụ anya ha n'aka ji n'aka, ha nwere ike ha enweghị ego, ma ọ bụ ọbụdị na-eche maka inweta ngwa ahịa gị. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ị ga-enwe usoro ị na-agbaso, na-eme nke ọma. Ozugbo ejikọtara gị, atụmanya na-aghọ njikọ nke ogo 1, ma dịrị na ntanetị gị ruo mgbe ebighi ebi, yabụ ị na-azụlite ha site na nsonye na ọdịnaya.
Ọ bụrụ na nke a na-ada ụda, ị nwere ike ịchụso iji Jiri nwayọ. Jiri amamihe nwere otu ya na ikpo okwu nke ha na netwọk na atụmanya gị na nnọchite gị wee pịa ndị ahụ na igbe mbata onye nnọchite ahịa gị ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ iji mechie ha. Nke a na enye ndi ahia gi ohere ime ihe ha na ire… ire. Hapụ na-elekọta mmadụ na-ere ka Clever!
Ihe ikpo okwu nke Cleverly jikọtara na LinkedIn iji nye gị ụzọ ka mma iji jikwaa, soro, ma zaghachi atụmanya - gụnyere ịpị ịpị-ma ziga ndebiri iji chekwaa oge ị zara.